Dhaqaale | Radio Himilo
Sadia Nour 11 days ago
Himilo – Waxaa sare kac laga dareemayaa qiimaha la kala siisto khudaarta kasoo go’da beeraha dalka ee lagu iibiyo suuqyada caasimadda Muqdisho. Sare u kacan ayaa si gaar ah u taabtay khudaarta kala ah Liin dhanaanta, ansalaatada, Bocor guduudka, Barbarooniga ...
Ahmed Haaddi 14 days ago
Himilo – Waddanka dhaca bartamaha Africa ee Central African Republic (CAR) ayaa adeegsiga lacagta loo yaqaano (cryptocurrency) ka dhigay mid sharci ah, sida lagu sheegay war ka soo baxay xafiiska madaxweynaha. Baarlamaanka dalkaas ayaa ugu codeeyay cod aqlabiyad leh in ...
Sadia Nour 21 days ago
Himilo – In ka badan boqol ruux ayaa ka qeyb gashay socdaal ay soo abaabushay hay’adda Happy Healthy You oo kaashaneysa urur kale oo samamfal ah, kaasi oo lagu qabtay barxadda Lister Park ee galbeedka England. Socdaanlkan ayaa ujeedkiisu ahaa ...
Himilo – Soon, -marka laga yimaado inay tahay bil afka la xira inta u dhaxeysa waabarkii illaa gabbal-dhaca, waa ayaamo ay muslimiinta xoojiyaan sameynta acmaasha wanaagsan, sida bixinta sadaqada. Waxaa bishan oo kale la arkaa ururo amaba dad is abaabulay ...
Diyaar garowga ciiddul Fidriga oo ka socda suuqyada Muqdisho
Himilo – Suuqyada ugu waaweyn ee magaalada Muqdisho waxaa ka socda diyaar garowga Munaasibadda ciidda soonfur ee nagu soo wajahan. Dad isugu jira carruur iyo Cirroole ayaa camiray suuqyada, waxaana ay iibsanayaan dharka iyo waxyaabaha kale ee ay ugu talagaleen ...
Ukraine oo heshay $34M oo lacagaha digitalka ah
Ahmed Haaddi March 3, 2022
Himilo – Dowladda Ukraine oo ka mid ah waddamada yar ee ilaa hadda lacagaha digitalka ah Crypto Currency o aqoonsaday lacag sharci ah ayaa heshay yabooh maaliyadeed dhan $34Milyan oo doolarka Mareykanka ah. Lacagtan ayaa ku dhacday kootada Dowladda Ukraine ...
Africa: Faa’iido miyaa ugu jirta dagaalka Ukraine?
Ahmed Haaddi March 2, 2022
Himilo – Inkasto oo sii socoshada dagaalka Ruushka iyo Yukreyn ay sababi karto mushkilad xagga Cunnada iyo Shidaalka ah oo ku habsata dalalka Africa ee ku xiran wax soo saarka dalalkaasi diriraya, haddana waxa ay ka dhaxli kartaa qaaradda faa’iidooyin ...
La kulan: Nin lix shaqo isku dul wata si uu u kordhiyo dhaqaalihiisa
Ahmed Haaddi February 13, 2022
Himilo – Covid-19 wuxuu beddelay hannaankii shaqo ee dadyowga dunida oo dhan. Wuxuu qasbay in guryaha laga dhex shaqeeyo si loo badbaado. Balse natiijada ka soo baxday waxay noqotay middaan la wada mahadin labadii sano ee la soo dhaafay, waxaa ...
Indonesia: Wiil sabool ahaa oo hal habeen ku taajiray
Ahmed Haaddi February 12, 2022
Himilo – Arday Indonesia u dhashay ayaa noqday maalqabeen habeen-dhalad ah kadib markii uu lacag fiican ka helay iibinta kumaankun sawiradiisa ah – isaga oo ka helay adduun hal milyan oo dollar ah. Sultan Gustaf Al Ghozali, 22 jir ah kaas ...
Ahmed Haaddi October 5, 2021
Himilo – Adeegyada aaladaha baraha bulshada sida Facebook, WhatsApp iyo Instagram ayaa dib hawada ugu soo laabtay, kadib ku dhawaad ​​6 saacadood oo ay hawada ka maqnaayeen, sida ay shirkadu shaacisay. Dhammaan saddexdan aaladood ee baraha bulshada ayaa waxaa iska ...